भारतीय सुरक्षाकर्मीको गोली’लागि १३ सर्वसाधारणको मृ’त्यु, के छ अबस्था ? — Imandarmedia.com
भारतीय सुरक्षाकर्मीको गोली’लागि १३ सर्वसाधारणको मृ’त्यु, के छ अबस्था ?
एजेन्सी। भारतीय सुरक्षाबलले उत्तरपूर्वी राज्य नागाल्याण्डमा एक ट्रकमा गोली चलाउँदा र आक्रमणको विरोध गर्न भेला भएका भीडलाई गोली हान्दा तेह्र जना सर्वसाधारणको मृ’त्यु भएको प्रहरीले आइतबार जनाएको छ।
पूरा सोन जिल्लाको अवस्था अहिले निकै तनावपूर्ण रहेको र नागाल्याण्ड बाहिरका एक मजदुरसहित १३ जनाको मृत्यु भएको पुष्टि भएको शनिबारको घटनाका प्रहरी अधिकारी सन्दीप एम। तामगाडगेले बताएका छन्।
तामगाडगेले ओटिङ गाउँमा आफ्नो घर फर्किने क्रममा सुरक्षाबलले गरेको हमलामा ६ जना मजदुरको मृ’त्यु भएको बताएका छन्। परिवारका सदस्यहरु बेपत्ता व्यक्तिहरुको खोजीमा गएका र शव फेला परेपछि सुरक्षा बलहरू सामना गरेका बताइएको छ।
त्यसपछि मृतकहरुका आफन्तका बारेमा प्रश्न गर्न गएका सुरक्षाबलबीचको झडपका क्रममा सुरक्षाकर्मीले गोली चलाउँदा थप सात जनाको मृ’त्यु भएको तामगाडगेले बताएका छन्।
भारतीय सेनाले जारी गरेको एक विज्ञप्तिमा यस क्षेत्रमा सक्रिय विद्रोहीहरूलाई पछ्याउन विश्वसनीय गुप्तचरहरुले काम गरिरहेको बताएको छ। यस विज्ञप्तिमा घटनाका क्रममा सुरक्षाबलका एक सदस्यको मृत्यु भएको र,
अन्य केही घाइते भएका पनि थपिएको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘दुर्भाग्यपूर्ण ज्यान गुमाउनुको कारणबारे उच्च स्तरीय छानबिन भइरहेको छ र कानून बमोजिम आवश्यक कारबाही गरिने छ।
दुर्भाग्यपूर्ण ज्यान गुमाउनुको कारणबारे उच्च तहमा अनुसन्धान भइरहेको र कानुन बमोजिम आवश्यक कारबाही गरिने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।नागाल्याण्डका मुख्यमन्त्रीले शान्त रहन अपील गर्दै छानबिनको घोषणा गरेका छन्।
सर्वसाधारणको हत्याको दुर्भाग्यपूर्ण घटना अत्यन्तै निन्दनीय छ, उनले ट्वीटरमार्फत सबै वर्गबाट शान्तिको लागि अपील गरेका छन। तेस्तै , भारतमा चौथो व्यक्तिमा पनि देखियो ओमिक्रोन,
भारतमा अर्को एक जनामा पनि कोभिडको ओमिक्रोन भेरियन्ट देखिएको छ। महाराष्ट्रका एक ३३ वर्षीय पुरुषामा ओमिक्रोन देखिएको हो। उनी हालै दक्षिण अफ्रिकाबाट मुम्बई आएका थिए।
उनीसँगै भारतमा ओमिक्रोन भाईरसबाट संक्रमित हुनेको संख्या चार जना पुगेको छ। पेसाले समुद्री इन्जियर ती व्यक्तिले कोभिडको दुबै खोप लगाएका थिए। मुम्बई उत्रिएपछि उनलाई सामान्य ज्वरो देखिएको थियो।
उनको मुम्बईस्थित कोभिड केयर सेन्टरमा उपचार भइरहेको छ। उनको सम्पर्कमा रहेका अन्य २३ जना यात्रुहरुको पनि कोभिड परीक्षण गरिएको छ।
उनीहरु सबैको नेगेटिभ रिपोर्ट आएको प्राप्त समाचारमा जनाइएको छ। यसअघि जाम्बियाबाट फर्किएका एक व्यक्तिमा पनि ‌ओमिक्रोन भेरयन्ट देखिएको थियो।
तेस्तै, घातक भनिएको कोरोना भाइरसको नयाँ भेरियन्ट, ओमिक्रोन श्रीलंकामा पनि देखिएको छ। पछिल्लो पटक अफ्रिकामा भेटिएको भनिएको यस भाइरसका संक्रमित श्रीलंकामा पनि देखिएको बताइएको हो।
श्रीलंकाको स्वास्थ्य मन्त्रालयले सो कुराको जानकारी दिएको छ। सो मन्त्रालयका अनुसार नाइजेरियाबाट केही दिन अघि श्रीलंका एकजना व्यक्तिमा सो भाइरस देखिएको बताइएको छ।
उनलाई हाल क्वारेन्टिनमा राखिएको छ। उनको उपचार भइरहेको बताइएको छ। तर पनि उनको अवस्था भने त्यति गम्भीर नपाइएको पनि बताइएको छ। अमेरिकाको न्युयोर्क सहरका पनि बिहीबार मात्र सो,
भाइरस भेटिएको अमेरिकाका स्वास्थ्य अधिकारीहरुले बताएका थिए। उनीहरुले यो नयाँ भेरियन्ट गत बुधबार मात्र अमेरिकाको क्यालिफोर्नियामा पत्ता लागेको पाइएको बताएका थिए।
यही नोभेम्बर २२ मा दक्षिण अफ्रिकाबाट आएका एक जना व्यक्तिमा सो भेरियन्ट देखिएको बताइएको थियो। यो भाइरस केही दिनमा नै विश्वका विभिन्न देशमा देखिएको छ। अहिले यो भाइरस विश्वका ३५ भन्दा बढी देशमा भेटिइसकेको छ।